Maamulka Gobolka Banaadir oo dhul laga haystay muwaadiniin dib ugu wareejiyay”SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Maamulka Gobolka ayaa maanta muwaadiniin Soomaaliyeed dib ugu celiyay dhul si sharxi darro ah looga deganaa muddo 25 sano ah.
Dhulkan oo ka kooban 30 boos kuna yaala xaafadda Buulo Xuubeey ee degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho, isla markaana si sharci darro ah muddo 25 sano ah looga deganaa Muwaadin Soomaaliyeed ayaa maanta waxaa dhulkaasi dib loogu celiyay dadkii iska lahaa, taasi oo ay ku guulesyteen maamulka Gobolka Banaadir.
Qaarka mid ah muwaadiniintii dib u helay hantidooda ma guurtada ah oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa uga mahadeliyay dowladda, gaar ahaan Maamulka Gobolka Banaadir oo gacan ka geystay sidii ay dib u heli lahaayeen dhulkooda.
Guddoomiyaha Degmada Wadajir Axmed Cabdulle Afrax oo isna goobta hadal kooban ka jeediyay ayaa sheegay in milkiilayaasha dhulka ay u soo gudbiyeen xafiiskiisa cabasho ka dhan ah dhul laga heystay, sidaasina uu ugu dambeyay Madaxda isaga ka sareysa.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Mudane Xasan Maxamed Xuseen “Muungaab” oo muwaadiniintaasi si rasmi ah ugu wareejiyay dhulka ayaa sheegay in maamulka Gobolka uusan ogolaan doonin heysashada dhul aan sharci loo heysanin, isagoo xusay in ay tixgelinayaan ciddii dhul sharci u haysata oo xoog looga deganyahay in uga qaadayaan.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa maalintii uu xilka guddoomiyenimo la wareegayay balan qaaday in maamulkiisa uu ka shaqeyn doono in hantida lakala haysto dib la isugu celiyo, waxaana maamulka gobolka uu horey sidaan oo kale ugu guuleystay in uu dib ugu celiyo muwaadiniin dhulkooda laga haystay.